Umpheki siqu. 200 m ukusuka ogwini. Uphahla - I-Airbnb
Umpheki siqu. 200 m ukusuka ogwini. Uphahla
Shela, Lamu, i-Kenya
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Charlotte
I-Bougainvillea House iyindlu emhlophe embozwe izimbali ze-lilac nezimhlophe ze-bougainvillea, futhi isendaweni engamamitha angu-200 kuphela ukusuka e-Indian Ocean kanye namabhishi ahlanzekile esiqhingi saseLamu. Vumela u-Eddie ukuthi apheke futhi akuphekele ukudla okumnandi.
Indlu inamakamelo okulala amathathu, ngalinye linombhede omkhulu ophindwe kabili (185 x 195 cm), inethi yomiyane kanye nefenisha yophahla. Elinye lamakamelo okulala libheke ingadi encane ebukekayo enesundu likakhukhunathi. Ikamelo ngalinye lixhunywe ngethala elingaphandle - bheka phezulu kanye lapho ukuze ubuke uphahla lwezimbali ze-bougainvillea! Kunegumbi lokugezela elilodwa elineshawa nendlu yangasese yezivakashi. Igumbi lokuhlala alinasizotha futhi liyikhaya, lifakwe itafula lokudlela lamapulangwe nezihlalo, izihlalo zokhuni, usofa futhi ngaphezu kwakho konke udonga lweLamu olugcinwe kahle oluneminyaka engamakhulu eminyaka ubudala futhi lunikeza igumbi umuzwa womlando.
Uphahla lwendlu lunikeza izinsuku zokuphumula ngaphansi kophahla lwefayibha kabhanana, noma ezihlalweni zamagumbi okuphumula. Ngaphezu kwakho konke inikeza ukubuka inkanyezi esibhakabhakeni esimangalisayo sasebusuku saseLamu, esingangcolisiwe ekukhanyeni okusizungezile kanye nokubukwa okucwebezelayo phezu kwezinkanyezi.
U-Eddie ungumnakekeli nompheki we-Bougainvillea House e-Lamu futhi uzolungisa ukudla kwasolwandle okumnandi okuhlanganisa inkalankala, ama-prawns, ama-lobster nenhlanzi, okubanjwe endaweni ngalo kanye ekuseni. Irayisi lakhe likakhukhunathi lingumphelelisi ophelele. Amanye amamango namapapaya amahle kakhulu emhlabeni azosetshenziswa njengogwadule. Ngokuqinisekile uzokwamukela noma yimiphi imikhawulo yokudla kanye nezicelo ngawe.
Ungabhala uhlu lwezinto ofuna u-Eddie azithenge, futhi umazise ngalokho ongathanda ukukudla ngesidlo sasekuseni, sasemini nesakusihlwa. Uzolungisa futhi aphake izitsha ngaphandle uma ufisa ukwenza lokho ngokwakho. Xoxani ngokuthi yini eningathanda ukuyidla esidlweni ngasinye, isibonelo ngosuku olulodwa kusengaphambili, ukuze abe nesikhathi sokuthenga izithako.
Uma uzizwa ufuna ukuthenga ukudla kwakho olwandle ungaya emakethe yezinhlanzi ekuseni kakhulu uyothenga okubanjwe osukwini, usanda kuthola!
Ngenkathi useholidini lakho e-Lamu kungani ungathathi uhambo lokudoba ngesikebhe i-Dhow noma uvele uhambe ngasogwini ukuze uthole indawo enhle. Ungathatha uhambo olude olwandle futhi uyobhukuda e-Indian Ocean. Amanzi afudumele futhi acwebile, futhi ulwandle luyamema. Ukuze uthole umuntu othanda izinto ezintsha ungakwazi ukutshuza emanzini, ukuntweza emanzini, i-snorkel, izinhlanzi zasolwandle ojulile noma kungani ungagibeli imbongolo ogwini lolwandle?
Idolobha Elidala laseLamu isayithi elinconyiwe ongalihlola ngenkathi useholidini lakho eLamu. Idolobhana liyindawo yamagugu omhlaba ye-UNESCO futhi ngokusho kwe-UNESCO "indawo yokuhlala yesiSwahili endala kunazo zonke futhi egcinwe kakhulu eMpumalanga Afrika". Ifana ne-Shela ne-labyrinth yayo yezindlela eziwumngcingo ezimema ukuhlola. Izakhiwo zeLamu Old Town ziyingxube eyingqayizivele yezitayela zokwakha zesiSwahili, isi-Arabhu, isiPheresiya, amaNdiya kanye nezaseYurophu.
I-Lamu Fort ingenye indawo ethokozisayo ongayivakashela. Yakhiwa ngeminyaka yawo-1800s ekuqaleni kwakuyiphuzu lapho ukulawulwa kogu lwaseMpumalanga Afrika kwabanjwa khona. Ngesikhathi sobukoloni bamaNgisi le nqaba yayisetshenziswa njengejele. Namuhla iqukethe imnyuziyamu nomtapo wolwazi.
Uma ufuna ukuzama into entsha, sincoma ukuthi uvakashele indawo yezimbongolo. Izimbongolo ziwukuphela kwendlela yokuthutha eLamu kuze kube muva nje, ngaphandle nje kokuhamba ngezinyawo. Zilinganiselwa ku-2 200 izimbongolo ezihlala eLamu futhi zisetshenziselwa ukuthutha imithwalo esindayo emihubheni emincane. Indawo engcwele inodokotela wezilwane ohlinzeka ngokwelapha izimbongolo mahhala.
Ukudoba kuyingxenye ebalulekile yempilo yabantu basesiqhingini saseLamu futhi maningi amathuba okuba nawe ubambe iqhaza kule ndlela yokuphila. Ngokwesibonelo ungabamba i-bream eduze kwesiteshi, noma udobe ulwandle olujulile uye olwandle ukuze ubambe izinhlanzi ezinkulu. Ungakhohlwa isikrini sakho selanga, amanzi nesigqoko!
Uma kukhona izinkinga ngesikhathi uhlala ungakhuluma no-Eddie ongazama ukukusiza.
Uma kungenjalo wamukelekile ukuthi usithinte ngomlayezo lapha ku-Airbnb. Uma sekwenziwe lokhu kuthunyelelwa i-SMS kumakhalekhukhwini wethu oseSweden, osazisa ukuthi kunomyalezo osalindile kusizindalwazi.
Uma kungenjalo wamukelekile ukuthi usithinte ngomlayezo lapha ku-Airbnb. Uma sekwenziwe…
Hlola ezinye izinketho ezise- Shela namaphethelo